liam, Author at Anycall Mobile — Page 15 of 16
Xiaomi ဟာ ပထမဆုံးဆိုတဲ့ အရာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ Xiaomi ဟာ 108MP ဖုန်းကိုပထမဆုံး စျေးကွက်ထဲမှာ ထုတ်ခဲ့ပြီး 30W Fast Wireless Charger ကိုလည်းပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Snapdragon…
In Weekly Hot News
သင့်အတွက်တစ်ပတ်စာ – ၃
အိန္ဒိယရဲ့ Online စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flipkart မှာ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Realme C3 Realme ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Madhav Sheth ရဲ့ မကြာသေးခင်က အတည်ပြုချက်အရ Realme C3 ဟာ…
Google Apps တွေမပါတာကြောင့် စျေးသက်သာလာဖို့ရှိနေတဲ့ Huawei P40 Series
မကြာသေးခင်က နှစ်တုန်းက Huawei P Series ဟာ Galaxy Note series နဲ့ iPhone Flagship ဖုန်းတွေကို ယှဉ်လာဖို့ Camera ပိုင်းကို လုံး၀ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း Huawei P40…
သင့်အတွက် တစ်ပတ်စာ – ၂ ﻿
January 26, 20203Mins Read
ဒီတစ်ပတ်အတွက်လည်း အဟော့ဆုံးသတင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့စုစည်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့လို နည်းပညာဂျပိုးတွေအတွက် ဖတ်စရာ မှတ်စရာ သိစရာသတင်းတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုလို ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအများကြီးထဲက သင့်အနေနဲ့ မသိမဖြစ် သိသင့်တဲ့ သတင်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Snapdragon…
ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဖုန်းအသစ်ကိုထုတ်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ POCO ﻿
POCO Fans တွေအနေနဲ့တော့ POCO F1 နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာတော့မယ့် POCO F2 ကို စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။ POCO အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ အနည်းဆုံး ဖုန်းသုံးလုံးကို မိတ်ဆက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ မကြာသေးခင်ကထွက်ထားတဲ့ သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။…
တိုက်တိုင်းအောင်စေဖို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းတွေက ?
ဖုန်းနဲ့ Games တွေကစားရတာ ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်? အခုလက်ရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတော်တော်များများဟာ မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေ အထူးသဖြင့် Online Games တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကစားလာကြပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဖုန်းဝယ်ရာမှာ Games တွေကို ကောင်းကောင်းဆော့နိုင်ဖို့အတွက်ပါထည့်စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ပထမဆုံး ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်…
သင့်အတွက် တစ်ပတ်စာ – ၁
အခုခေတ်နည်းပညာလောကကြီးက တော်တော်အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းလို့ အမီလိုက်နိုင်မှ တော်ကာကျမှာပါ။ ဒီအတွက် နည်းပညာသတင်းတွေကို အချိန်မီ တစုတစည်းတည်း သိနိုင်ဖို့ တစ်ပတ်လုံးမှာ Hot ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.. နောက်အပတ်တွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုး တစ်ပတ်စာသတင်းတွေကို စုစည်းပြီးတင်ပေးသွားမှာမို့လို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့…
LPDDR5 RAM အကြောင်းတစေ့တစောင်း…
စာဖတ်သူအနေနဲ့ အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ LPDDR5 RAM ဆိုပြီးတွေ့မိကြမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒီလို LPDDR5 RAM ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ? သူ့ကြောင့်ဖုန်းတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်သွားလဲ?? ဒီလို မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အခု Atricle ထဲမှာဖော်ပြေပေးသွားပါ့မယ်။ LPDDR5 ကို ဖုန်းတွေအပြင် Cloud Computing…
K30 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ထားတဲ့အချက်တွေ
2019 ကုန်ခါနီးမှာ Xiaomi ရဲ့ ​Brand ခွဲ ဖြစ်တဲ့ Redmi ဟာ Redmi K30 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ K30 4G Version ထွက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ အခု 5G Version…
Huawei P40 ရဲ့ Render ပုံတွေအရ ဖုန်းမှာ Dual Punch-Hole Display နဲ့ Triple Rear Cameras တို့ပါဝင်ကြောင်းပေါ်ထွက်လာ
Huawei P40 နဲ့ Huawei P40 Pro တို့ရဲ့ CAD Renders တွေဟာ 2019 December တုန်းက 91mobiles မှာ ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို Renders တွေကို Onleaks…
စျေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတွေအတွက် Gaming Chipsets တွေထုတ်ပေးဖို့ရှိနေတဲ့ MediaTek
Gaming Chipsets တွေဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 730G နဲ့ MediaTek ရဲ့ Helio G90T Chipset တွေကြောင့် အရင်နှစ်တုန်းကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ထို Processor နှစ်ခုဟာ Mid-range နဲ့…
Black Shark3ဟာ ပထမဆုံး 16GB RAM ပါဝင်လာတဲ့ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်
Black Shark3ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Model နံပါတ် SHARK KLE-AO ရှိတဲ့ Black Shark ဖုန်းတစ်လုံးဟာ တရုတ်မှာအရင်လက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုလက်မှတ်မှာ ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာအချက်အလက်မှဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမယ့် ဖုန်းဟာ 5G ထောက်ပံ့ပေးလာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုထွက်လာတဲ့သတင်းအရ…
ကျစ်လျစ်တဲ့ Body ၊ 90Hz Screen နဲ့ Quad-Cameras ပါဝင်တဲ့ OPPO Reno3 5G နဲ့ Reno3 Pro 5G တို့တရားဝင်ထွက်ရှိလာ ﻿
OPPO ကတော့ OPPO Reno3 5G နဲ့ Reno3 Pro 5G စတဲ့ သူတို့ရဲ့ 5G ဖုန်းအသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Reno3Series ဟာ အရင်လအနည်းငယ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Reno…
တရားဝင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Realme 5i
Realme 5i ဟာ India မှာ4GB RAM + 64 GB Storage Version ကို စျေး Rs. 8,999 (~$126) မြန်မာငွေ ၂ သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။…
SoC ဆိုတာဘာလဲ ? စမတ်ဖုန်း Chipsets တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ။ ﻿
နည်းပညာ‌ဝါသနာအိုးတွေကတော့ PCs တွေနဲ့ Gaming Consoles တွေကနေစပြီး နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေက Processing Power နဲ့ Chips တွေအကြောင်းကိုပြောရတာ သဘောကျကြပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောမှာက Arm ၊ Qualcomm ၊ Samsung…